Kugadzira Rwendo rweKutenga rweVatengi | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 25, 2015 NeChishanu, Gunyana 25, 2015 Laura Swanson
Kugadziridza ruzivo rwekutenga kune vamwe vatengi hachisi chinhu chitsva. Chimbofunga nezve manzwiro aunowana kana iwe ukashanyira nzvimbo yekudyira yemuno uye iye waress anorangarira zita rako neako semazuva ese. Zvinonzwa zvakanaka, handiti?
Kuzvifananidza ndeyokudzoreredza kubata kwake, kuratidza mutengi waunonzwisisa uye ane hanya naye. Tekinoroji inogona kugonesa maitiro ehunhu, asi kuita kwechokwadi zano uye kufunga kunoonekwa mukudyidzana kwevatengi neako brand.
Zviri nyore kutaura pane kuita. Vatengesi uye mabrand vanonetsekana nekwavanofanira kutanga, chii chekuisa pamberi uye ndedzipi mhinduro dzekushandisa. PaFitForCommerce, vatengi vedu vanowanzobvunza "Chii chandingaite kuti ndigadzirise ruzivo rwevatengi?" Sezvaungatarisira, hapana mhinduro "imwe-saizi-inokodzera-zvese".
Kununura zvakajairika zvekutenga zviitiko pachiyero – kuzviuru kana mazana ezviuru zvetarisiro uye vatengi varipo – zvinoda kuburitsa akaomesesa data seti, maitiro uye matekinoroji. Izvo zvinogona kunzwa zvakanyanya. Ehezve, vatengesi vanogona kuendesa matekinoroji matsva anovagonesa kuita A / B kuyedza, kuunganidza dhata, kana kugadzirisa kushambadzira kweemail kana zviitiko zvepa-saiti. Asi, pasina zano rakazara, aya maitiro ari kure nekukodzera.
Isu munguva pfupi yapfuura takaongorora vatungamiriri vanopfuura zana vepamusoro, vakaita hurukuro dzakawanda nevatengesi nevatapi vetekinoroji, pamwe nekushandisa ruzivo rwedu rwekuzvionera mushumo wegore ra100, Ngatitorei Isu Pachedu: Omnichannel Kuita pamunhu muNyika Yakabatana-Yakabatana. Chirevo ichi chinopa zano rakabatana rekubatanidza kuita kwako nhanho imwe neimwe yerwendo rwekutenga-kubva kushambadza kusvika nzira yekuendesa zvigadzirwa.
Hondo yekuhwina vatengi uye kuvimbika kwevatengi haina kumbobvira yave nehasha uye vatengi havana kumbobvira vanyanya kudzvinyirira. Kunyangwe chiteshi, vatengi vako vanotarisira kushambadzira mameseji, zvinyorwa zvinobatsira, uye zvigadzirwa uye zvinopihwa kuti zvive zvine chekuita. Kana iwe ukaita izvi nemazvo, zvinobatsira kukanganisa yako yepazasi mutsara. Vazhinji vatengi vanozofara kugovana ruzivo rwemunhu pamusoro pavo kana vachiziva kuti rwuchapa izvi zvakakosha uye nezviitiko zvevamwe
Zvakawanda zvekuita, zvishoma ...
Nguva? Zvishandiso? Ziva sei? Kutenga-mukati? Aya angori mamwe ematambudziko anotaurwa nevatengesi mukuyedza kushandisa zano remunhu. Zvichida Nhanho yekutanga mukugadzirisa matambudziko aya manejimendi kutenga-mukati. Kana maneja manejimendi angonzwisisa mashandisirwo emunhu kusimudzira mari, iwe une pfuti iri nani pakutora zviwanikwa nemari yaunoda.
Kuita kwako munhu ndizvo, uye kunofanirwa kuve kwekutanga
Kuita zvemunhu zviri pachena bhizinesi rekutanga pamhando, kunyangwe kana vasinganyatso kuziva kuzviita. 31% yevakuru vatakaongorora vanoti kutaurwa kwemunhu kuri pakati pezvitatu zvavo zvekutanga zvegore ra2015.
Nzira yekutanga sei
Iputse muzvinhu zvinoshanda zvakarongedzwa kutenderera rwendo rwekutenga. Funga nezvekuti ungaita sei iwe ruzivo pachiitiko chimwe nechimwe.
Kuita kuti atariswe. Chii chinomukwezva kune yako saiti? Iwe unogona sei kushandisa izvo zvaunoziva nezve wako mutengi kumubata iye?
Iwe une hanya naye. Zvino, ungashandisa sei zvemunhu zvemukati, zvinopihwa, nzira dzekutengesa uye maitiro akanakisa ekumuchengeta achibatana uye kuvhara kutengeswa?
Ndomufadza zvakatowedzera. Kamwe iyo odha ikaiswa, iwe ungaita sei kuti uve munhu wechigadzirwa dhirivhari, kurongedza uye basa revatengi kuti uwedzere kusimbisa hukama hwako naye?
Ngwarira chinotyisa chikonzero. Kuvanzika uye kuchengetedzeka kunetsekana. Unobata sei ruzivo rwake uye nekurwuchengetedza?
Iyo glue inoibata zvese pamwechete. Ndeupi rudzi rwe data iwe yaunofanira kutora, unoiunganidza sei uye, zvakanyanya kukosha, unoishandisa sei kuti ugadzire zvakasarudzika zviitiko.
Paunenge uchinge wapfuura mukurovedza kwekunzwisisa maitiro aunogona kugadzirisa ruzivo rwese, sarudzo yekuti ungazviita sei uye neapi matekinoroji ekushandisa ave nyore. Pane kusahadzika kushoma kuti munda uyu ucharamba uchichinja uye vatengesi nemabrand anoshandisa nekunatsiridza kwavo kuita kwevanomira anomira mukana uri nani wekuhwina mujaho wekushandurwa kwevatengi uye kuvimbika kupfuura avo vasingadaro.
FitForCommerce inyanzvi yekutengesa mabhenefiti iyo inobatsira ecommerce uye omnichannel mabhizinesi kuita nehungwaru kudyara sarudzo pasarudzo, tekinoroji, kushambadzira, kushambadzira, mashandiro, mari, dhizaini dhizaini nezvimwe. Varairidzi vedu vaimbove vekutengesa kana vekurapa vashandi vanowedzera ruzivo rwavo kuti vape mazano uye maoko-kutungamira pane zvese zvinodiwa kuvaka, kukura uye kukurumidza bhizinesi rako.
FitForCommerce ichave ichiratidzira pa Shop.org's Dhijitari Summit muPhiladelphia Gumiguru 5th-7th mune dumba # 1051.
Tags: rwendo rwevatengizvakavanzika zvevatengikuchengetedzwa kwevatengiPersonalizationmunhu zvichienderana
Laura Swanson chipangamazano wepamusoro kuFitForCommerce, ane makore anopfuura makumi maviri ehutungamiriri mukutengesa-nzira dzakawanda, achitora nzvimbo zhinji dzehunyanzvi - kubva kuKutenga, Kuronga & Kugovera, Staffing, Kushambadzira Kushanda, IT / Telecom uye Clienteling kuenda kuOnnichannel Strategy.